IChiefs ithembise okuhle iphendula izikhalo zabalandeli abaziletha ngelanga lemashi - Impempe
IChiefs ithembise okuhle iphendula izikhalo zabalandeli abaziletha ngelanga lemashi
Abalandeli beKaizer Chiefs
Iphendule ngesitatimende eside kodwa esicubungula isikhalo ngasinye iKaizer Chiefs ezimfunweni ezafakwa ngabalandeli ngelanga bemasha. Abalandeli beChiefs bamasha ngoMeyi 14 benezikhalo ngokwehlelwa yizinga kwaleli qemnu kule minyaka embalwa ezayo.
Izikhalo zabo zemukelwa nguJessica Motaung, ehamba nomfowabo uKaizer Motaung Junior, nodadawabo uKemiso Motaung. Bathembisa ukuzidlulisela phambili lezi zikhalo.
NgoMsombuluko iChiefs ikhiphe isitatimende iphendula lezi zikhalo. Ibe seyibheka iphuzu ngalinye kulawa afakwa ngabalandeli.
“Siyalihlonipha ilungelo lenu lokuveza imibono yenu nokuthi ilalelwe. Siyazi ukuthi okunye kwalokhu okwavela ohlwini lwezikhalo yinto nabanye abayizwayo.
“Akubona kuphela labo abamasha, kodwa nabanye abaxhumane nanithi ngezinye izindlela banemizwa efanayo. Okwakuqukethwe encwadini yezikhalo kuthathelwe phezulu kwafakelwa izibuko eqenjini,” ibifundeka kanje ingxenye yalesi sitatimende.
Phakathi kwamaphuzu ewabalulile iChiefs elokwehlelwa yizinga kule minyaka edlule. Ithi ikhona imizamo eyenziwayo ukunqanda lesi simo.
“Iqembu limatasa ngokuhlela kabusha indlela yokudlala nezinhlaka zeqembu ukuze kuqinisekiswe ukuthi indlela yokudlala iyaqiniswa. Kubalulekile ukugcina ukuxhumana phakathi kwenkulisa neqembu elikhulu nokuthi kuyahambisana ekukhuliseni izinseko namasiko eqembu,” kusho iChiefs.
“Sizoqhubeka nokusebenza kanzima ukusayina abadlali abasezingeni eliphezulu ukuqinisa iqembu. Siyethembisa nokuqhubeka nokunyusa ithalente elikhuliswa ezinkulisa zethu, bese liqiniswe ukhakhayi ngabadlali asebenamava.
“Kunezinyathelo esezithathiwe ukuqinisekisa ukuthi kunesisekelo esiqinile ukuze sakhe iqembu elidlala kahle futhi elinabafana abasebancane abazoba yiqembu lamanje nakusasa,” kuqhuba lesi sitatimende.
Bathembise nokuqhubeka nokwakha iChiefs ukuze igcine yaziwa futhi ihlonishwa emhlabeni jikelele. Lokhu kuzokwenzeka ngokuthi izimisele uma idlala emiqhudelwaneni yeCAF.
“Sisagxilile ezifisweni zethu ngeCAF Champions League futhi sifuna ukuqhubeka nokuthola imiphumela emihle. Ukuba wukuphela kweqembu lasezansi ne-Afrika elisasele kulo mqhudelwano kuqinisa umbono wethu ofaka ukuphumelela ezwenikazi nasemhlabeni.
“Lo mbono waqala ukuvezwa ngusihlalo ngo-2002 ngesikhathi iKaizer Chiefs ivotelwa njengeqembu eliphambili e-Afrika ngemuva kokuwina iCAF Cup Winners Cup (Mandela Cup) (isibizwa ngeCAF Confederation Cup manje),” kusho iChiefs.
Side lesi sitatimende saMakhosi kodwa sizolokhu sikuhlephulela kuso, sikusikela ngala sinone ngakhona.
Previous Previous post: Usebheke ukulungisa amaphutha ngesizini ezayo uZinnbauer kwiPirates
Next Next post: Usefikile kuleli uBaxter okulindeleke athathe umsebenzi wokupheka iChiefs